I-PUBG yeHacks Hacks ye-Emulator Hacks Cheats, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGoldpack
IPUBG yesiphelo seselfowuni ethubeleza
Sebenzisa i-PUBG Mobile Emulator yabucala ii-hacks zabucala ukufikelela kwi-Aimbot, i-ESP, iWallhack, kunye nobuninzi bezinye izinto eziya kuthi zikuguqule ube ngumdlalo wokugqibela!
Sele uyithengile i-PUBG Mobile Emulator Hack? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge i-PUBG Mobile Emulator hacks, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu IPUBG yesiphelo seselfowuni Hacks
I-PUBG ye-Mobile Emulator Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iiWall Hacks kunye nokunye
Thenga IPUBG yesiphelo seselfowuni IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha i-PUBG Mobile Emulator ukhetho kwiindidi ngee-hacks ekufuneka sizibonisile.
Khetha i-hack efanelekileyo ehambelana nazo zonke iimfuno zakho zePUBG zeFowuni apha kwiGamepron.
Yenza intlawulo yakho usebenzisa i-100% yeendlela zokuhlawula ezikhuselekileyo, ukuqinisekisa ukhuseleko lolwazi lomsebenzisi.
Emva kokuba uthenge isitshixo semveliso, fikelela kwi-PUBG Mobile hacks, kwaye uqalise!
Kutheni le nto i-Gamepron PUBG ye-Emulator hacks?
Xa uza kungena kuwo nawuphi na umdlalo, ukukhetha ukusebenza ngezixhobo ezikumgangatho ophantsi akuyi kukwenzela nto. Ngokwenyani iya kukubeka emngciphekweni omkhulu wokuvalwa, kuba uninzi lwezixhobo ezikumgangatho osezantsi azinakho ukukhuselwa okukhohlisayo okusebenzayo ngaphakathi kwabo. I-Gamepron igxile ekunikezeleni abasebenzisi bethu i-standard-hacks esemgangathweni ngayo yonke into ekhutshiweyo, kwaye oko kuthetha ukuba xa ufuna ukukopela kwi-PUBG Mobile, kuphela komnikezeli ekufuneka ujonge ukuthenga kuye. Sikunika ukufikelela kwi-emulator ye-emulator eya kuthi iphumelele imidlalo emininzi kunokuba ungayibala, njengoko zonke izinto ezibandakanyiweyo kwi-PUBG Mobile Emulator Private Magnum hack zilungiselelwe ukusebenza.
Asinakuvumela abasebenzisi bethu bajongane nesixhobo esingenazinto bazifuna kakhulu, yiyo loo nto siye saya ngaphezulu nangaphaya koko kwenziwa ngabanye abaphuhlisi. Ewe uyakufumana i-PUBG yemveli yeAimbot kunye ne-ESP / Wallhack ekhoyo kule ngxoxo, kodwa kukho okungaphezulu koko! Ukudlala umdlalo weselfowuni kwi-PC kuluncedo olukhulu kwangoko, kwaye xa ubeka izinto zethu ezingaphumeleliyo ngaphezulu, akukho nto ichazayo ukuba uza kuphumelela midlalo mingaphi. Abasasazi kunye nabenzi bemxholo banokuxhamla nasekusebenziseni esi sixhobo, njengoko siza kukunceda ukuba unyuke ungene kwinqanaba ngaphandle kwexesha! Ukufumana ukufikelela kumxholo omtsha kumdlalo phambi kwakhe wonke umntu ngokulawula kunye nokulinganisa ngokulula.
Ukuba uqaphele ukuba awungekhe uqhubeke nabadlali abakhuphisanayo kwi-PUBG Mobile, sinesisombululo sakho apha. Sebenzisa ukukopela kuyaphikisana nemigaqo yenkonzo, kodwa ungavalwa kuphela xa ekubamba- seso sizathu sokuba i-Gamepron ibanjwe kakhulu ngabathengi bethu. Akukho namnye kubathengi bethu ekufuneka exhalabile malunga nokuvalwa kweeakhawunti zabo ngelixa besebenzisa i-PUBG Mobile Emulator yabucala iMagnum hack, ayi-100% ayifumaneki kwaye ihlala ihlaziywa ukuze ihlale injalo.
Abasebenzisi beGamepron abananto yokoyika ngelixa badlala iPUBG Imfono, ukuba nje unayo i-PUBG Mobile Emulator Private Magnum cheat isebenze! Ngeempawu ezizodwa kunye nezinto ezintsha, sikholelwa ekubeni le yeyona PUBG yeSelfowuni yokukhohlisa onokuyithenga khona ngoku (ngaphambi kokuba sikhuphe ebhetele thina, kunjalo).
I-PUBG yesiphelo seWall Wall (ESP)
Ulwazi lwePUBG yesiphelo somdlali we-ESP (igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
I-PUBG ye-Emulator ye-Mobile Eem kunye neefilitha
I-PUBG yesiphelo sendlela yesiphelo yeAimbot
PUBG Isilumkiso sesilumkiso sotshaba esilumkisayo
I-PUBG Mobile yesiphelo imowudi yokutsiba (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo).
I-PUBG yeselfowuni yesiphelo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
I-PUBG ye-Emulator yokuHlaziya kwakhona ukuhlawula
Ngokufanelekileyo IPUBG yesiphelo seselfowuni yimfumba Iimbonakalo
I-PUBG yesiphelo somdlali we-ESP
Sebenzisa indawo yoMdlali we-ESP ukuchonga iintshaba ezikufuphi kwimephu, okanye ezifihle ngaphakathi kwezakhiwo! Ukukopela ngobuchule ngeGamepron.
Ulwazi loMdlali i-ESP iya kuvumela abasebenzisi bethu ukuba babone iintshaba kunye namagama abo, imivalo yezempilo, kwanokuba umgama wabo uhleli phi. Akukho mntu unokukufihla ngoku!
Jonga ezona zinto zibaluleke kakhulu kwiindawo eziqinileyo usebenzisa into yethu ye-ESP (eneefilitha). Ukuba ufuna ukuyiphanga, i-Item ESP yethu inokuyenza.
Ii-Aimbots ziya kwahluka kumgangatho, kodwa i-Gamepron ibonelela nge-PUBG Mobile Emulator aimbot ekhoyo kwi-Intanethi. Lawula abo ukhuphisana nabo namhlanje!
I-PUBG Mobile Emulator Bullet track (esebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Ukulwa okufutshane kunye nokuphakathi komgama akusayi kubonakala ngathi kuxakekile, njengoko unokusebenzisa indawo yethu yeBullet Track ukubona ukuba ujikelezaphi. Ukufezekisa xa uqinisekisa ukubulala kwakho!
Iintshaba azinakho ukuwisa kuwe ngesi sixhobo senziwe sasebenza! Isilumkiso sethu siza kubonisa umyalezo okwiskrini nanini na usengozini.
I-PUBG Mobile yesiphelo imowudi yokutsiba (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Ukonakala kokuwa kunokuba yinkohliso ukujongana nako, kodwa ngoku akusengxaki. Sebenzisa indlela yethu yokutsiba okuphezulu ukuthintela ukuthatha umonakalo!
I-PUBG yeselfowuni yesiphelo kunye nenjongo ephambili enokuthi iqwalaselwe
Qwalasela i-PUBG yakho ye-Mobile aimbot ngeendlela ezininzi usebenzisa eyethu iBone kunye neAim yeQhosha eliCwangcisiweyo. Uza kuthatha isigqibo ngokuchanekileyo ukuba i-aimbot yakho iza kusebenza njani!
I-PUBG ye-Emulator ye-Mobile emulator iitshekhi ezibonakalayo
Ukuba i-aimbot yakho itshixela kwiintshaba ngeendonga, kunokuba nesikrokro- sebenzisa into ebonakalayo yokuKhangela ukudubula kuphela abantu abakubonayo.
Ukuphinda uyenze ayisiyonto kufuneka ukhathazeke ngayo nge-PUBG yeFowuni yabucala yeMagnum yokuqhekeka, njengoko isiza neRecoil Compensator.
Abona badlali babalaseleyo bePUBG Mobile baya kuba nenkohliso eninzi abathembele kuyo, uninzi lwayo oluya kubafumana kwiGamepron. Abona baduni badumileyo kwishishini lokudlala bahlala bejonge kwi-Gamepron ye-PUBG Mobile cheats, kwaye ngoku ungazibandakanya kulonwabo! Yiba yinto ephambili kwi-PUBG Mobile ngokufumana ukufikelela kwi-PUBG Mobile yabucala yeMagnum yokuqhekeza namhlanje.
I-PUBG edumileyo ye-Emulator Hacks kunye nokukhohlisa
I-PUBG yeselfowuni ye-ESP kunye neWallhack
Ezinye ii-PUBG ze-Emulator iiHacks kunye nokukhohlisa
Umboneleli owaziwayo weehacks kunye nokukhohlisa ubuyile, kwaye singcono kunangaphambili! I-PUBG Imfono yinguqulelo yeselfowuni yoMdlali wethu ongathandekiyo weMidlalo yeDabi, idabi lomdlalo eliye lathatha ilizwe ngoqhwithela iminyaka emininzi. Imidlalo ye-Battle royale ikhule yathandwa ngokukhutshwa kwe-PUBG, kodwa iPUBG Mobile ifana nomntakwabo omncinci- abantu abaninzi bangathanda ukulungisa i-PUBG yabo ngelixa besendleleni, kodwa izakhono zabo azizukuguqulela ngokufanelekileyo. Nokuba yiyo loo nto, okanye awunazo naziphi na izakhono ukuqala ngazo (sukukhathazeka, asizukuyibambelela kuwe!).
Owona mdlalo uthandwa kakhulu ufanelwe zezona cheats zibalaseleyo, kwaye yile nto siyenzayo apha kwiGamepron. Ngelixa abanye ababoneleli behack bekho nje kweli shishini ngenzuzo, ekuphela kwento esijolise kuyo kukubonelela abathengi bethu ngemveliso ethembekileyo. Xa ufuna iziphumo, i-PUBG Mobile Emulator yabucala yeMagnum yeqhekeza ngokuqinisekileyo iya kuzisa.
I-Aimbots phantse ayinakwenzeka ukuba isetyenziswe kwi-PUBG Mobile ngaphandle kokuba usebenzisa i-emulator hack! Ungadlala iPUBG Iselfowuni kwiPC kwaye ube nethuba elikhulu kwasekuqaleni, njengoko uza kusebenzisa imouse kunye nekhibhodi xa kuthelekiswa nabadlali beselfowuni! Xa uphosa i-PUBG Mobile aimbot ngaphezulu kwento leyo, abasebenzisi bafumana indibaniselwano engathintelekiyo eya kubenza baphumelele ngaphezulu kunangaphambili. Ukuphumelela kwi-PUBG Iselfowuni kufuna ukuchaneka, okunokuthi kuziswe yi-aimbot yethu ngomthwalo wesikhephe! Ayinamsebenzi ukuba ijolise phi, iPUBG Mobile aimbot inazo zonke iimpawu ezifunekayo ukuzicima.
Esi sixhobo sinikezela ngeSmooth Aiming ukukhusela abantu ekubeni bangarhaneli, kwaye unokuhlengahlengisa ukuba ungathanda ukuba i-aimbot ikhawuleze kangakanani ukujolisa kwithagethi. I-Bone Prioritization ikhoyo nayo, ivumela abasebenzisi ukuba bakhethe iinxalenye ezithile zomzimba ukuze i-aimbot yethu idubule! Yenza ngokwezifiso kwaye isebenziseke lula, le yeyona nto ibalaseleyo yokujikeleza.
Sebenzisa i-ESP kunye neWallhack ngelixa udlala iPUBG Mobile izakubeka abasebenzisi kwindawo engcono yokuphumelela. Awusayi kuphinda uhambe kwimephu ngokungaboni, njengoko uya kuba nakho ukusebenzisa i-ESP (Ukuqonda okungakumbi kokuqonda) ukufumana imvakalelo yokuma komhlaba. Chonga iintshaba kunye nezinye izoyikiso (ezinjengeziqhushumbisi kunye nemigibe) usebenzisa uMdlali / umba we-ESP, kunye neNkcukacha zoMdlali i-ESP ikunika iinkcukacha ezingakumbi! Ungawabona amagama abo, impilo, kunye nomgama xa unike amandla uLwazi loMdlali.
Amathambo-iibhokisi anokubonwa naphina kwimephu kwaye aya kukwazisa ukuba ziphi na iintshaba ngoku, kunye nalapho baya khona-ungabona nokuba loluphi uhlobo lwesikrweqe abakuso! Ukuphanga i-ESP kukunika ithuba lokuphanga ngamehlo akho, ukonga ixesha kunye nomzamo kwinkqubo. Ukuba isakhiwo asinanto ilungileyo, uya kwazi ngaphambi kokuba ungene. Lungiselela umdlalo wakho ngePUBG Isiphelo seSelfowuni iMagnum yabucala.
Ukonakaliswa okuphezulu ngokuchanekileyo njengoko igama liza kuphakamisa, njengoko inqaku liya kuguqula iibhulethi zakho rhoqo zibe yinto engaphezulu. Abanye abadlali banqunyelwe xa kufikwa kubungakanani bomonakalo abanokuthi bawenze, kodwa abasebenzisi beGamepron banokwenza uMonakalo oPhezulu kwaye bakhuphe nabani na! Ayinamsebenzi ukuba bangaphi abantu abakufutshane, nokuba loluphi uhlobo lwezixhobo abazisebenzisayo, Umonakalo oMkhulu uza kubabetha apho kubuhlungu khona!
Indawo yonyawo yinto onokuyisebenzisa ukulandela umkhondo weentshaba, ngenxa yoko awunyanzelekanga ukuba ubhekise ngqo kwiintshaba. Unokukhetha ukuthatha indlela ecekeceke ngokulandela umkhondo weenyawo, kunye nenqaku lomgama liya kukwazisa ukuba usondela kangakanani. Ukumangaliswa akusiyonto kwakhona xa ukhetha ukuqhekeza nge Gamepron, kwaye oko kuthetha ukuba uza kuphumelela ngezinga eliphezulu kakhulu. Uloyiso alunakuphepheka xa ukopela ngezixhobo zePUBG zeSelfowuni ezifanelekileyo!
Sebenzisa i-emulator ukudlala iPUBG Iselfowuni akuyi kukuvumela kuphela ukuba ukhuphisane nabantu abasebenzisa imouse kunye nekhibhodi, kodwa ikunika ithuba lokuphumeza ii-PUBG zeHacks ezingcono. Usebenzisa i-PUBG Mobile Emulator yabucala iMagnum iya kukubonelela ngeempawu ezinje ngezifiso ze-FOV Circle, okanye iinketho ze-ESP ongazukuyifumana kolunye uhlobo lwePUBG Mobile cheat. Nantoni na onokucinga ukuba iyinzuzo kumava akho ePUBG eSelfowuni
kunokwenzeka ukuba ubekhona ngaphakathi kwesi sixhobo, kodwa ekuphela kwendlela yokufumanisa ukuba kukuzizamela ngokwakho!
Ukuza kwi-hacker ngelixa udlala i-PUBG Mobile ayinqabile kwezi ntsuku, kwaye ukuba awukwazi ukubabetha, unokuzibandakanya nabo! Ukufumana izandla zakho kwi-PUBG Mobile cheats ilula xa uthenga nge-Gamepron, yiyo loo nto abasebenzisi bethu beqhubeka nokubuyela-izixhobo ezisemgangathweni ezivela kwi-Gamepron zibophelelwe kukonwabisa nawuphi na umdlalo!
PUBG Iselfowuni i-Emulato Hacks imibuzo
I-PUBG Mobile Emulato Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Kutheni le yethu iPUBG yeselfowuni yokuGqibela
I-Gamepron ngumboneleli okhokelayo we-PUBG Mobile hacks ngesizathu, kwaye kungenxa yomgangatho wethu. Sizibophelele kumgangatho okoko kwasungulwa i-Gamepron, kwaye xa kuthelekiswa nabanye ababoneleli beprimiyamu, yenye yeenkonzo ezinokufikeleleka ngakumbi! Sukuzibamba kukhetho lokusilela xa iPUBG hacks zethu zilapha, zilungele ukusetyenziswa.
Kutheni iPUBG yethu ye-Emulator ye-Mobile Aimbot
Usebenzisa i-PUBG Mobile Emulator yabucala iMagnum cheat iya kukunika ukufikelela kwi-aimbot, ekunyanzelekileyo ukuba ikuxhase ngandlela thile. Ukubulala iintshaba akuyi kuba ngumzabalazo, njengoko i-aimbot ingaze iphoswe- konke ekufuneka ukwenzile kukubeka useto lwakho kwaye ubukele umlingo usenzeka! Nge-aimbot yethu, incinci iya kuma endleleni yakho yoloyiso.
Kutheni i-PUBG Mobile Emulator ESP
I-PUBG Mobile izele ziintshaba, kodwa ikwanokuphanga okuluncedo! Kuthatha ixesha elide ukufumana imipu oyikhangelayo, kodwa ukusebenzisa i-Item ESP yeqhekeza kuya kukuvumela uchonge ezona zinto zibalaseleyo ngaphandle kokukhangela phezulu nasezantsi. Unokwenza nje into ye-ESP kwaye xa ubona into oyithandayo ngodonga, unokuma kwaye uyikhethe.
Kutheni iPUBG yethu yesiphelo seselfowuni iWallhack
IiWallhacks ziluncedo nakweyiphi na imidlalo yokuphila / yedabi, njengoko ukukhathazeka malunga nabanye abadlali kunzima ngokwaneleyo. Ungasebenzisa i-PUBG ye-Emulator yabucala iMagnum yabucala kwi-wallhack kwaye ubone ukuba baphi abadlali kwiindawo eziqinileyo / ezi-opaque, ekuthintela ukuba ungangxami (kwaye ikunike ithuba lokulalela abantu ngokwakho!). Akukho mntu ukhuselekile kwingqumbo yakho kunye ne-wallhack yethu esebenzayo.
Kutheni i-PUBG Mobile Emulator Norecoil
Ukuphinda ubuye kufana ne-bug ecaphukisayo engazukuhamba, kwaye ngaloo ndlela, sinokuthathwa njenge-bug spray. Sebenzisa iRecoil Compensator yethu ukuba uqhekeze kwaye ufumane isibonelelo sokuchaneka ngaphandle kokuba "ucace" kakhulu, nto leyo enokubonakala ngathi abasebenzisi be-aimbot ngamanye amaxesha. Ilungele abo bafuna ukujongeka bendalo ngelixa bekopa, uMbuyekezo wethu weCompensator uyimfuneko.
Ungazikhuphela njani ezona zilungileyo zePUBG zeSiphelo sendlela?
Ukukhuphela i-PUBG Mobile Emulator yabucala iMagnum hack ayinzima kwaphela, mhlawumbi yenye yeendlela ezilula zokufumana ukukopela. Nje ukuba uthenge isitshixo semveliso yakho, ungayisebenzisa ukufikelela kwiiseva zethu kunye nokukhuphela iPUBG Mobile hack - ixesha elinokuthi ufikelele kulo liya kuba ngokokhiye wemveliso yakho.
Kutheni le nto iPUBG yesiphelo sakho seselfowuni ibiza kakhulu kunezinye?
Ukuba ucinga ukuba amaxabiso ethu ayabiza, qwa lasela inyani yokuba sinikezela kuphela ngenani eliqingqiweyo lokubeka kuzo zonke izinto esizenzayo. Singathanda ukukhonza wonke umntu oyifunayo, kodwa ngelishwa, sinokusebenzela kuphela inani elithile labasebenzisi ngaxeshanye. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa zonke izixhobo zethu zi-100% ezingafakwanga kwaye ziya kugcina abasebenzisi beMidlalo yeGronzi bekhuselekile!
Sinikezela ixesha eliya kusebenza nakubani na, njengoko siqonda ukuba abanye abasebenzisi bafuna nje ukubona ukuba sisixhobo esingantoni na. I-Gamepron ngoku iyathengisa
Kuhle IPUBG yesiphelo seselfowuni yimfumba Iimbonakalo